Kooxda Chelsea oo guuul dirqi ah ka gaartay kooxda Fullham +sawiro – Gool FM
Kooxda Chelsea oo guuul dirqi ah ka gaartay kooxda Fullham +sawiro
Bashiir March 3, 2019
( Premier League ) 2 March 2013 kooxda Chelsea ayaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda Fullham kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ciyaarta ayaana ku dhamaatay 2-1 .
Qeebtii koowaad ee ciyaarta kooxda Chelsea ayaa soo bandhigaty qaab ciyaareed cajiib ah waxaan u suura gashay in ay la yimaadaan labo gool qeebtii koowaad ee ciyaarta , goolka koowaad waxaa u dhaliyey xidigooda dhwaan galka ah ee Gonzalo Higuain.
Calum Chambers oo daafca ugu ciyaara kooxda Fullham ayaa dhaliyey goolka bareejada daqiiqadii 26-aad ee ciyaarta , waqti yar un kaddib xidiga heerka caalami ee xulka Italy ee Jorjinho ayaa u dhaliyey kooxdiisa Chelsea goolkii labaad ee ciyaarta.
Ugu dambeen qeebtii koowaad ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-1 oo ay kooxda Chelsea kaga horkaceyso dhogeeda kooxda Fullham .
Nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta , kooxda Fullham ayaana sameesay isku dayo dhowr ah qeebtii dambe ee ciyaarta .
Dhinaca kale oo kooxda Bules ayaa dhankeeda sameesay isku dayo badan oo dhowr ah balse dhankoodana uma suura galin in ay gool kale keenaan qeebtii dambe ee ciyaarta , dhamaadkii ciyaarta goolhayaha kooxda kooxda Chelsea ee Kepa Arrizabalaga ayaa sameyey badbaadin cajiib ah .
Ugu dambeen ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2-1 oo a ay guushu ku raacday kooxda Chelsea oo adkaaneysa labo kulan oo xiriir ah oo Londone derby .
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Everton Vs Liverpool
Liverpool oo lagala wareegay hogaanka horyaalka kaddib bar baro ay la dhaafi weyday Everton +sawiro